Su'aalaha La Weydiiyo - Shenzhen Yuebaixiang Technology Co., Ltd.
Haa, waxaan ubaahanahay dhamaan amarrada caalamiga ah inay lahaadaan tirada dalabka ugu yar ee socda. Haddii aad raadineyso inaad dib u iibiso laakiin tiro aad u yar, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso degelkeenna.
Waxaan damaanad qaadeynaa agabkeena iyo shaqadeena. Balanteenu waa qanacsanaantaada alaabtayada. Dammaanad ama maya, waa dhaqanka shirkadeena inay wax ka qabato oo ay xalliso dhammaan arrimaha macaamiisha si qof walba ugu qanco.
Qashinka-Daadinta Soo-saarista Rotary Die, Laser dhinta, Muraayadda Dusha sare ee Muraayadda oo Dhinta, Birta xardho steel, Auto-Waxyaabaha Buuxinta xardho dhinto, Maaskarada Rotary Die,